SomaliTalk.com » Qoyska
Home » Qoyska
Warqad Furan :Bahda Caafimaad maamulka Soomaliland – Dawada Misoprostol : Ummul-gargaar ma ahee ,waa Ilmo soo rida
Warqad Furan :Bahda Caafimaad maamulka Soomaliland Dawada Misoprostol : Ummul-gargaar ma ahee ,waa Ilmo soo rida !! Waxaan telefishanka ETN TV ka daawaday dhiirigalin uu dhiirigalinayo mid ka mid ah madaxda caafimaadka ee maamulka Soomaaliland ,dawada la yiraahdo Misoprostol . Waxay wasaarradda caafimaadka soomaliland u bixisay Ummul-gargaar ,iyadoo la leeyahay waxay joojisaa dhiig baxa haweenka...
Ha ku ciyaarina caruurtiina!|Rooxaan
Waxaan ku bilaabaynaa magaca Allah salaana korkiisa ha ahaato rasuulkiisa Kadim markii aan u fiirsaday sida ay somali badan ula dhaqmaan caruutooda iyo sida ay u koriyaanba waxaa ii soo baxaday waxaalo badan oo dhibaatooyin ah oo umadeena ka haysata xaga dhaqanka. Umadeena intabadan waxay asal ahaan kasoo jeedaan dhulka naxariista daran baadiyaha ah, dhaqanaka ad adayga ku dhisan ee reer badiyaha ayaa...
Sidee u kasbanaysaa Quluubta Dadka kale
Walaalayaal marka hore waxaad iga gudoontaan salaanta islaamka, salaan ka bacdi waxaan dhammaantiinba idiin rajeynayaa kheyr iyo barwaaqo. Walaalayaal waxaan warqaddan idiinku soo dirayaa si aad iila qaybsataan kheyrka iyo nimcada aan arkey. Walaalayaal waxaa markey taariikhdu ahayd 09kii bishii agoosto nagu soo booqday magaalada Copenhagen ee dalka Denmark, sheekh Ibraahim bin cabdalla Aduweyish....
Qurbacleey iyo qoyska|Sh.Ahmed
Qurbacleey iyo qalalaasaha qoyska Qoyska waxaa wada unka wiil iyo gabar iska soo dhex doortay dad oo dhan, isuna haya kalgacayl iyo kalsooni weyn. Qoyska waxaa la unkaa iyada oo lammaanaha is guursaday, ehelkooda, asxaabtooda iyo muslinka oo dhan ku wada faraxsan yihiin, waxaana laga fishaa deganaansho, xasilooni iyo is badal wacan oo dhinac walba kaga yimaada nolosha lammaanaha qoyska wada dhistay....